Mvila: vatungamiriri venyika vanochengetedza kuchengetedza rugare muCameroon - TELES RELAY
HOME » kambani Mvila: Vatungamiri venyika vanochengetedza kuchengetedza rugare muCameroon
Kutsunga kwavo kubatsira kuchengetedza runyararo muCameroon kunowanikwa muchitauriri chakatendera kubvunzurudza kwavo kwe13 Mai 2019 muEbolowa. Kuzvipira kwakasimba pamusi weNational Unity Day.
Mumashoko aya ane simba, vatungamiri vezvemadzitateguru eEbolowa I and Il vanosimbisazve kuzvipira kwavo kuchengetedza rugare uye kusazviona kweCameroon. Ivo vanosimbisa kuburikidza nechiito ichi kugadzikana uye kunyarara mumunharaunda yavo nemisha yavo. Izvi zvinobva kune vimbiso dzemadzitateguru emadzitateguru zvinoreva kukwana kwavo zvakakwana kuti vaite basa rinogadziriswa munzvimbo yekuvaka yekubuda kweCameroon.
Maererano naMambo Wake Mukuru Laurent Olouman Mutungamiri wesangano reEbendeng Nko'ovos I uye mutauriri wemadzitateguru eEbolowa I uye II, "tinozivisa pachena kuti zvinangwa zvekusimudzira rugare, kubatana, kubatana hukama uye hukama hwehutano ndewe uye hunoramba huri makadhimine maitiro evanhu vemunharaunda yeEbolowa ".
Kubatana kwevatungamiri vezvemadzitateguru kunoshora nemasimba makuru ekuita kusachengeteka uye kutaura kwekutambudzika. Vanokumbira vaKameron kumativi ose kuti varemekedze masangano eRepublic uye iye anovashandura. Zviratidzo zveizvi zvinonzi Ebolowa kuzivisa zvinoratidza kunge zviduku zvinogona kutaurwa nezvekukurukurirana kukuru nevaapositori vorugare.
Mukuzadzikiswa kwemasimba avo emisangano avo vanochengetedza tsika iyi zvisinei apo mune basa ravo maererano naMambo Wake Laurent Olouman Ebendeng "tinovimbisa nechisimba nekutsunga kune vanhu vose vekusimudzira kwedu uye zvakakwana kudzivirira nguva dzose kubatana, kubatana, kubatana uye rugare pakati pemadzinza nemagariro evanhu vanogara muEbolowa. Ebolowa anoramba aripo nokusingaperi kusingagadziki kwechisimba chemuchinjikwa wekubatana kwehurumende. "
Madzishe ematunhu eEbolowa I uye II akaisa dzidzo. Aya masangano ehurumende haazombotonhori zvikonzero zvekutambudzika.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://actucameroun.com/2019/05/18/mvila-les-chefs-traditionnels-sinvestissent-dans-la-preservation-de-la-paix-au-cameroun/